युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ? यो नयाँ फिचर तपाईँका लागि हुन सक्छ - Technology Khabar
» युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ? यो नयाँ फिचर तपाईँका लागि हुन सक्छ
युट्युब च्यानल चलाउनुहुन्छ? यो नयाँ फिचर तपाईँका लागि हुन सक्छ
गुगलले युट्युब च्यानलका सर्जकहरुको काम सजिलो बनाउनका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ।
यो फिचरअनुसार अब क्रियटरहरुले आफ्ना युट्युब च्यानलको नाम र प्रोफाइल पिक्चर बदल्न सक्नेछन्। यो फिचरको मुख्य विशेषता भनेको च्यानलको नाम र प्रोफाइल पिक्चर बदल्दा गुगल एकाउन्टको नाम बदल्नु पर्दैन। गुगललाई कन्टेन्ट क्रियटरहरुले यस्तै प्रकारको फिचरका लागि थुप्रै इमेल पठाएपछि गएको अप्रिल २२ तारिखदेखि यसलाई सार्वजनिक गरेको हो।
यो फिचर व्यक्तिगत तथा ब्रान्ड दुवै प्रकारका भिडियो शेयर गर्ने सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनेछ। हालै युट्युबले एउटा चेक फिचर पनि ल्याएको छ जसले कुनै पनि भिडियो सामग्री बनाएर अपलोड गर्न खोज्दा कपिराइटको अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ।
नाम परिवर्तन गरिएको एकाउन्ट भेरिफाइड रहँदैन
भिडियो सामग्रीका सर्जकले आफ्नो नाम र प्रोफाइल पिक्चरलाई लिंक गरेको गुगल एकाउन्टको नाम परिवर्तन नगरी नै नाम र प्रोफाइल पिक्चर बदल्ने मोका पाउनु सकारात्मक कुरा हो। तर युट्युबको नाम परिवर्तन गरेपछि उक्त एकाउन्ट ‘भेरिफाइड’ रहने छैन। यस अवस्थामा फेरि भेरिफिकेशनको लागि आवेदन दिन भने सकिनेछ।
के अमेरिकाको ५जी रुचि वास्तवमै ५जीमा छ त?
सनराइज बैंकको क्यूआर सेवा विराटनगरका टेम्पो र ई–रिक्सामा